सेलिब्रिटीका समाचार, गसिप बिक्छन् भन्दैमा उनीहरूका व्यक्तिगत जीवनमै आघात पुग्ने खालका सामग्री प्रस्तुत गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। निशा अधिकारी, रिमा विश्वकर्मालगात अभिनेत्रीले सेलिब्रिटीको ‘डिजिटल कन्टेन्ट’ दुरुपयोगविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नामक समूहमार्फत अभियान थालेका छन्।
‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खिचिएका मेरा तस्बिर र सामाजिक सञ्जालमा मेरो स्वामित्व भएका डिजिटल कन्टेन्ट तपाईंको मिडिया हाउसलेबिनाअनुमति प्रयोग गरिरहेको छ। कृपया ती सामग्री हटाइदिनुहोला ! किनकि, तिनले मेरो चरित्रहत्या गरिरहेका छन्। साथै, मलाई मानसिक आघात पु¥याइरहेका छन्। म यो विषय सहमतिमा सल्टियोस् भन्ने चाहन्छु। अन्यथा, कानुनको सहायता लिन बाध्य हुनेछु।’
केही दिनयता अभिनेत्री तथा भीजे रिमा विश्वकर्माले विभिन्न मिडिया सञ्चालकलाई पठाइरहेको सन्देशको सारांश हो यो। आफ्नो विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको खबरलाई बारम्बार तोडमोड गरिएपछि आजित भएकी उनले ती सामग्री हटाउने अभियान सुरु गरेकी हुन्। आफ्नो आग्रहलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएको र त्यस्ता सामग्री हटाउन थालेको भए पनि केहीले अझै अटेर गरिरहेको उनले ‘अन्नपूर्ण सम्पूर्ण’लाई बताइन्।
आफ्नो ‘डिजिटल कन्टेन्ट’ युट्युबरले अनधिकृत रूपमाप्रयोग गरेको देखेपछि अभिनेत्री निशा अधिकारीले त्यस्ता युट्युबरलाई ती सामग्री हटाउन फेसबुकबाट आग्रह गरिन्। उनले पनि आफ्नो अनुरोधलाई केही मिडियाले तत्कालै ‘रेस्पोन्स’ गरेर हटाएको भए पनि केहीले भने अझै नसुनेको बताइन्।
अहिले रिमा र निशा मात्र होइनन्, थुप्रै सेलिब्रिटी आफ्ना डिजिटल सामग्रीको दुरुपयोगलाई लिएर एकजुट भएका छन्। उनीहरू फेसबुकमा ‘जिरो टोलरेन्स’ नामक समूह बनाएर यस अभियानमा सक्रिय भएका छन्। समूहमा उनीहरूले खासगरी युट्युबमा राखिएका शीर्षक र तिनमा आएका टिप्पणीले सभ्य समाजको मर्मलाई गिज्याइरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध व्यापक अभियान सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
‘जिरो टोलरेन्स’को समूह बनाएर सबैलाई गोलबद्ध गर्ने अभियानको सुरुवात निशाले गरेकी हुन्। उनले ‘काठमान्डू पोस्ट’मा प्रकाशित ‘साइबर बुलिइङ’ सम्बन्धी समाचार पढेपछि यसविरुद्ध केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर यो विषयमा छलफल थालेको बताइन्। ‘त्यो रिपोर्टमा साइबर बुलिइङका कारण एक जना युवतीले ज्यान गुमाएको कुराले मलाई झसंग बनायो,’ निशाले भनिन्, ‘हामी सेलिब्रिटीले त झन् दिनदिनै यस्तो भोगिरहेका छौँ। हामीले आउँदा पुस्तालाई के छाडेर जान खोजिरहेका छौँभन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। हामीले कल्पना गरेको समाज यस्तो हुनुहुन्न भन्ने लागेर अभियान थालेका हौँ।’सबै क्षेत्रका मानिस समेटेर यस अभियानलाई व्यापक बनाउनेसमूहको चाहना छ।
अन्य सेलिब्रिटी पनि आफूलाई असर गर्ने कन्टेन्ट हटाउने अभियानमा सक्रिय भइसकेका छन्। धेरैले आफूहरूको आग्रह मानेर कन्टेन्ट हटाइदिएको सूचना पनि समूहमा बाँड्ने गरेका छन्। तर, सेलिब्रिटीको यो अभियानले धेरै युट्युबरलाई झस्काएको छ। अझ केहीले त यसलाई युट्युबर भर्सस सेलिब्रिटीको लडाइँका रूपमा बुझ्न थालेका छन्। तर, निशाले यो लडाइँ मिडियासँग नभई समाजका खास मानिससँग भएको बताइन्। ‘मैले सेलिब्रिटी भएर यो कुरा सोचेकी होइन,’ उनले भनिन्, ‘आमा भएर सोचेकी हुँ। अबको बच्चाको दुनियाँ भनेकै नेट हो। जेजति कुरा सिक्छ, नेटमा सिक्छ। तर, के उसलाई हामीले आफ्नी आमा र दिदीबहिनीलाई अपशब्द बोल्नु सही हो भन्ने कुरा प्रशिक्षित गराउने ?’
रिमाले पनि निशाको तर्कमा सहमत जनाइन्। उनले यस अभियानलाई मिडियाविरोधी अभियानका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘हामी सबै मिडियाबाट आएका हौँ। अझ म त पत्रकारिताकै विद्यार्थी हुँ। त्यसैले यो मिडियाविरोधी अभियान होइन। तर, भ्युज र पैसाका लागि हाम्रो चरित्रहत्या हुने गरी सामग्री राख्न पाइँदैन। यो गलत अभ्यास हो।’ उनले विगतमा सेलिब्रिटीबाट गल्ती भएकाले यस अभियानले आफूहरूको पनि समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको बताइन्। ‘सामाजिक सञ्जाल र युट्युब हाम्रा लागि नयाँ थिए,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा प्रस्तुत हुने कुरामा हाम्रातर्फबाट पनि गल्ती भए होलान्। तर, यो अभियान कसले विगतमा के ग¥यो भन्नलाई होइन। अब भविष्य कस्तो बनाउने भन्नलाई हो। सायद यो छलफलले हामीलाई सच्चिन प्रेरित गर्छ।’
युट्युबले भिडियोबापत पैसा दिन थालेपछि नेपालमा ‘क्लिकबेट’को खेती सुरु भएको हो। यसमा पनि सेलिब्रिटीका कन्टेन्टले प्रशस्त भ्युज पाउन थालेपछि धेरै युट्युबर यतातिर लागे। तर, पैसा कमाउने उद्देश्य मात्र राखेका उनीहरूले सामाजिक दायित्य बिर्सिएपछि सेलिब्रिटीको चरित्रहत्याको शृंखला सुरु भयो। यसमा शीर्षक (हेडिङ) बिगार्नेदेखि भन्दै नभनेका कुरालाई भनेको जस्तो पारेर बेच्ने सिलसिला सुरु भयो। र, यो प्रवृत्ति र देखासिकीमा दिन दुई गुना रात चौगुना वृद्धि भयो।
युट्युबरले कमाउने अभिप्रायले गरेका उटपट्याङ, स्तरहीन र गैरजिम्मेवार कामले सेलिब्रिटीको भने दिनमा भोक न रातमा निद्रा हुने गरेको छ। भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी आँचल शर्मा युट्युबरले हदै पीडित बनाएकी कलाकार हुन्। फागुन अन्त्यतिर डा. उदीप श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी आँचलले विवाहको भोलिपल्टदेखि युट्युबमा अनेक कुरा देख्नुप¥यो। पार्टीमा लगाएको लुगाको मोलदेखि पैसाका लागि उदीपसँग विवाह गरेको सम्मका हेडिङमा दर्जनौँ भिडियो बने। हुँदाहुँदा त हालसालै उनले उदीपसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको व्यहोराको भिडियोसमेत बनेको देखिन्। अति भएपछि आँचल अहिले त्यस्ता युट्युबरलाई तह लगाउन प्रहरीको सहायता लिने तरखरमा छिन्। उनले लकडाउन खुल्नेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी दिने बताइन्।‘प्रहरीको साइबर सेलको सहयोगमा युट्युबरको लिस्ट तयार भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा रजिस्टर्ड र नन रजिस्टर्ड भनेर छुट्याएका छौँ। अहिले लकडाउनमा प्रहरी कार्यालय जान सम्भव नभएर चुप लागेर बसेका छौँ। खुल्नेबित्तिकै उजुरी दिन्छौँ।’
निशा भने कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा समाजको मनोविज्ञानको उपचार गर्नुपर्ने सोच राख्छिन्। ‘कानुनले एकदुई जनालाई तह लगाउला,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीले यस्तो भद्दा विचार निस्कने मूल नै बन्द गर्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ समाजले महिलालाई तथानाम गाली गर्ने कुरामा मौन स्वीकृति जनाएको छ। त्यसैले यस्ता हजारौँ अभियान चाहिन्छन्।’
अहिले ‘जिरो टोलरेन्स’मार्फत सेलिब्रिटीले आफूहरूको डिजिटल कन्टेन्टको अनधिकृत प्रयोग र आफू सम्बन्धित कन्टेन्टमा दर्शकको भद्दा कमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर, भविष्यमा अन्य विषयपनि अभियानमा समेटिँदै जाने उनीहरूको कथन छ।
‘जिरो टोलरेन्स भनेको महिलालाई आघात पर्ने कुनै पनि कुरा सहिन्न भन्ने हो,’ रिमाले भनिन्, ‘यसमा साइबर बुलिइङदेखि डिजिटल कन्टेन्टको स्वामित्वसम्म पर्छन्। तर, यो कुरा सेलिब्रिटीको मात्र होइन, सबैकाहकमा लागू हुन्छ।’
लकडाउनको फुर्सदको समयमा सुरु भएको अभियानले कति लामो यात्रा तय गर्ला, भन्न गाह्रो छ। तर, यसले पैसाकै लागि मात्र जथाभावी गर्ने युट्युबरलाई आफूहरूले गरेको काम सच्याउन प्रेरित ग¥यो भने पनि ठूलै उपलब्धि हुनेछ।